Ao anaty paompy slurry ny impeller sy ao anaty casing dia miharihary hatrany amin'ny slurry ary tsy maintsy arovana mifanaraka amin'ny akanjo. "Ny fisafidianana fitaovana ho an'ny impeller sy casing dia zava-dehibe toy ny safidin'ny paompy ihany!" Misy fepetra telo samihafa izay mamorona akanjo amin'ny slu ...
Impeller dia rotor, singa mihodina amin'ny paompy centrifugal. Ny lambam-baravarana eo aloha sy ao aoriana dia misy bà mipoaka izay mampihena ny fandotoana indray sy ny fahalotoan'ny tombo-kase. Ny metaly mafy sy ny impeller elastomer bobongolo dia azo ovaina tanteraka. Atsipazo amin'ny kofehy impeller dia tsy mila fampidirana na voanjo. High efficienc ...
Rehefa pumping slurries abrasive dia tsy fanontaniana raha mila tahiry pump slurry ianao ary mitafy faritra - fanontaniana ny hoe rahoviana. Miaraka amin'ny rafitra miharo tanteraka sy ny vahaolana amin'ny famatsian-loharano tokana dia manatsotra ny lisitra, ny fizarana ary ny fametrahana ireo pompe slurry sy tahiry hitazomana ny ...